बिज्ञान/प्रबिधि Archives | Page 20 of 20 | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
यस्तो देखिदैछ आजको सूर्यग्रहण (लाइभ भिडियो सहित)
शुक्रबार सूर्यग्रहण लाग्ने भनेर धेरैले हल्ला गरेका छन् । कसैले त दिउँसै अँध्यारो हुन्छ भनेर समेत भन्न भ्याइसके । तर ज्योतिषीका अनुसार शुक्रबार ग्रहण त लाग्छ, तर नेपालमा होइन । यूरोप, अफ्रिका... Read more
अब तपाइँको फेसबुक म्यासेन्जर बाट पैशा पनी ट्रान्सफर
नम्बर वान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्नो मेसेन्जर एपबाट फेसबुक प्रयोगकार्ताले एकआपसमा पैसा पठाउन र पाउन सक्ने फिचर राख्ने तयारी गरिरहेको छ । विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय सोसल मिडिया फेसबुकले छिट... Read more
के तपाईँको इन्टरनेटको गति कम छ? छ भने यसो गर्नुहोस ।
सामान्यतया यो प्रश्नको जबाफ ‘हो’ वा ‘छ’ मा नै आउँछ । किनकी इन्टरनेटको महासागर र आजकलको इन्टरनेटमय जीवन शैलीमा जत्ति नै स्पिड भए पनि त्यो कम नै जस्तो लाग्छ। मेरो आफ्नै अनुभवको कुरा गर्ने हो भ... Read more
फेसबुकले बन्द गर्‍यो फ्रेण्डफिड
एजेन्सी । सबै भन्दा चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्नो एउटा एप्लिकेसन बन्द गरेको छ । खासै चर्चित नभएको र प्रयोगकर्ता घट्दै गएपछि फेसबुकले FriendFeed बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सन् २००९ म... Read more
फेसबुकमा कसैले ट्याग गरेर हैरान पारेको छ ? भने यसो गर्नुस्
२०७१ फागुन २५ गते – आफ्ना तस्वीरहरुलाई धेरै फेसबुके साथीसँग सिधै शेयर गर्ने निकै सजिलो माध्यम हो फेाटो ट्यागिङ । तर यो फिचर धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि टाउको दुखाइको विषय समेत बनेको... Read more
नेपालसहित १ सय देशमा सित्तैमा इन्टरनेट बाँड्ने फेसबुकको तयारी
काठमाण्डौं । बिश्वको नम्बर एक सोसल मिडिया फेसबुकले झण्डै एक सय मुलुकका गरिव जनतालाई सित्तैमा इन्टरनेट सेवा दिने तयारी गरिरहेको छ । फेसबुकको अगुवाईमा सुरु भइरहेको इन्टरनेट डट ओआरजी अभियान अन्... Read more
थाहा छ,पासवर्ड विना नै खुल्न सक्छ फेसबुक !
के तपाइँलाई थाहा छ तपाइँको फेसबुक अकाउण्ट चलाउनका लागि कतिपय ब्यक्तिलाई पासवर्ड जरुरत नै पर्दैन । थाहा छैन भनेपनि यो सत्य हो । फेसबुकले आफ्ना कतिपय कर्मचारीलाई फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुको अकाउण्... Read more
निकट भविष्यमै कार उड्ने
जव हामी लामो ट्राफिक जाममा फस्छौं । तव सोच्ने गर्छौ कि यो कार उडाउन पाए हुन्थ्यो । अव यो कल्पना मात्रै रहेन । अमेरिकाको एक कार बनाउने कम्पनीले चालक रहित उड्ने कार निकट भविष्यमै बजारमा ल्याउन... Read more
नेपालमा विपीओ सेवा ओझेलमा
बिपीओ सेवा भनेको आउटसोर्सइं एउटा महत्वपूर्ण भाग हो जसमा बिजनेसका कार्य हरुलाई दोर्स्रो कम्पनिलाई जिम्मा दिएको हुन्छ ्र बिपीओ सेवा दुइ किसिमका हुन्छ्र पहिलो हो देशभित्रबाटै गरिने सेवालाई इन्स... Read more
इन्टरनेट स्पिडमा भारतभन्दा नेपाल अगाडि
काठमाडौं : इन्टरनेट डाउनलोड स्पिडमा भारतभन्दा नेपाल अगाडि देखिएको छ। ओक्लास नेट इन्डेक्सका अनुसार इन्टरनेटको स्पिडमा नेपाल, भुटान र जिम्वाबेपछि भारत रहेको छ। भारतको इन्टरनेटको पूर्वाधार निर्... Read more